Warar - Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Sannadka Cusub ee Shiinaha
1, Maalinta koowaad ee bisha koowaad ee bisha lama oran jirin xilligii gu’ga xilliyadii hore, laakiin waxaa loogu yeeri jiray maalinta sannadka cusub.
2, Taariikhda Shiinaha, erayga "Bandhigga Gu'ga" maahan iid, laakiin tixraac gaar ah ayuu u yahay "Bilowgii Guga" ee 24 ereyada qorraxda.
3, Bandhigga Guga guud ahaan waxaa loola jeedaa bilowga sanadka dayaxa Shiinaha, taas oo ah, maalinta koowaad ee bisha koowaad ee bisha. Dabaaldegga xilliga gu'ga ee dadka Shiinaha macnihiisa ballaadhan waxaa loola jeedaa maalinta siddeedaad ee bisha laba iyo tobnaad, ama bisha laba iyo tobnaad ee 23, 24, illaa maalinta shan iyo tobnaad ee bisha ugu horraysa ee bisha..
4 ， In kasta oo Iidda Guga ay tahay caado guud, laakiin nuxurka dabaaldegu maalin walba waa ka duwan yahay. Laga bilaabo maalinta koowaad ilaa maalinta toddobaad, waa maalintii digaagga, waa maalintii eeyga, waa maalintii doofaarka, waa maalintii idaha, waa maalinta lo'da, waa maalinta faraska iyo maalinta ninka.
5 Marka lagu daro Shiinaha, waxaa jira dalal kale oo badan oo adduunka ah oo u dabaaldega Sannadka Cusub ee Lunar oo ah maalin rasmi ah. Waxay kala yihiin: South Korea, North Korea, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Mauritius, Myanmar, iyo Brunei.